Daawo Kartoono Cajiib ah oo laga Sameeyay Ururka Dam Jadiid oo hada gacanta kuhaya Talada Dalka Somalia - ada qosli doonee. - iftineducation.com
Daawo Kartoono Cajiib ah oo laga Sameeyay Ururka Dam Jadiid oo hada gacanta kuhaya Talada Dalka Somalia – ada qosli doonee.
iftineducation.com – Kartooniistaha Caanka ah ee Soomaaliyeed Amiin Caamir ayaa soo bandhgay Cartoon uu kaga hadlayo Siyaasada Ururka Dam Jadiid oo la rumeesan yahay In Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu katirsan yahay .
Kaartoonka Amiin uu soo sawiray ayaa ah mid muujinaya in awooda Dalka gaar ahaan Madaxtooyada Soomaaliya ay gacanta ugu jirto Ururka Dam jadiid oo kamid ah Ururada kajira Dalka Soomaaliya iminkana ku dhax milmay Siyaasada Dalka.
Ururka Dam Jadiid ayaana saameyn aad u badan ku leh Dowlada Soomaaliya iyadoona lagu arkayo Xubno katirsan Ururkaasi Xafiis kasta ee Dowladu leedahay iyagoo sidoo kale Haya Xillaka ugu Muhiimsan eeDowlada uu Madaxweynaha ka yahay Prof Xasan Sheekh Maxamuud.
Inta Badan Soomaalida oo la sheegay inay yihiin dad cunsuriyiin ah oo Soomaalida kala midab sooco(Daawo Layaabkaan)
Daawo Muuqaaka Sir Fakatay: Nimco Yaasiin Iyo Ikraan Caraale Oo Fashiliyay Guurka Fiska iyo Ceyduruus (Daawo)